एक युवतीलाई गरेको त्यो एकतर्फी माया–गौरव पहाडी - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
२ माघ २०७४, मंगलवार
रिलिज अगावै बाहिरिए ‘होली डे’ का तस्विर
सकियो मिस्टर भर्जिनको काम, बैशाख अन्तिममा प्रर्दशन हुने
किन पछि हटे निर्देशक मिलन चाम्स ?
प्रदीप र जसिताको ‘ईज ईट लभ’ कति रुचाईयो ?
‘नेप्टे’मा सुपारी काँचो
एक युवतीलाई गरेको त्यो एकतर्फी माया–गौरव पहाडी
२५ जेष्ठ २०७४, बिहीबार १५:२८
अभिनेता गौरव पहाडी अभिनित सिनेमा ‘रातो घर’ यतिबेला हलमा छ । सिनेमालाई दर्शकले राम्रो प्रतिक्रिया दिएका छन् । सिनेमासँगै म्युजिक भिडियोबाट पनि चर्चामा आएका गौरभलाई धेरैले साईँलाको नामले चिन्छन् । उनले ‘साईँली’ बोलको गीतमा अभिनय गरेपछि सबैले उनलाई ‘साईँला’ उपनाम दिएका हुन् । पछिल्लो समय यूवाको रोजाईमा परेका गौरवले हामीसँग आफ्नो बाल्यकाल र किशोरावस्थाका केही अनुभवहरु सेयर छन् ।
बाल्यकाल र पढाई
मेरो जन्म काठमाण्डौमा भयो तर बाल्यकालका केही वर्ष नेपालगंजमा बिते । मेरो आमा परिवारको जेठो सन्तान भएका कारण म मावली परिवारको जेठो नाति थिएँ । त्यही कारण पनि सबैको मायामा पुलपुल्लीएर हुर्किने मौका मिल्यो । कक्षा एक सम्म मैले नेपालगञ्जमा नै पढेँ । त्यसपछि बल्ल काठमाण्डौ आएँ । कक्षा ३ सम्म महाराजगञ्जको एक विद्यालयमा अध्ययन गरेँ । अनि ४ देखि १० सम्म लिटिल एञ्जल्स्, हात्तीवनमा पढें ।
पढाईको कुरा गर्नु पर्दा, म भन्दा मेरो दुई जना भाईहरु ट्यालेण्ट थिए । म पढाईमा भन्दा खेलकुदमा धेरै ध्यान दिन्थेँ । फूटबल, बास्केटबल, भलिबल, क्रिकेट मलाई मनपर्ने खेल हुन् । खेल्न पाईने भएकै कारण पनि विद्यालयमा कम्प्युटर भन्दा पनि फिजिकल एजुकेशनलाई छानेको थिएँ मैले । पढाईमा त्यस्तो धेरै ट्यालेण्ट पनि हैन र नजान्ने पनि होईन । म सामान्य नै थिएँ । मलाई सबै भन्दा मनपर्ने विषय भनेको ब्यवस्थापन हो ।
एस.एल.सी पछि म प्लस टु पढ्न गर्न भारतको केरला गएँ । कलेज अध्ययनको समयमा ब्यवस्थापन र अर्थशास्त्रमा पहिलो र दोश्रो हुन्थ्ये म । विद्यालयमा राम्रो हुन नसके पनि कलेजमा भने आफूलाई मन परेको विषयमा राम्रो नम्बर ल्याउँदा एकदमै खुशी मिल्थ्यो । होस्टेलमा बसेर पढेका कारण पनि होला मलाई गेमको बारेमा धेरै चासो हुन्थ्यो ।
बुवा भेट्न आउँदा निकै रोएँ
म कलाकारितामा लागेपछि आफूले पढेको स्कूल गएको थिएँ । मलाई बाल्यकालको त्यो समयमा निकै ठूलो लाग्ने विद्यालय अहिले पनि त्यस्तै ठूलो रहेछ । अहिले त झन् विश्वविद्यालय जस्तै देखिने भएछ । त्यो बेलाको साना–साना रुखहरु अहिले निकै ठूलो भईसकेछन् । मेरो बाबा पनि कलाकार नै हुुनुहुन्छ । भनिहालें, हामी ३ जना दाजुभाई हो । म घरको पहिलो सन्तान हुँ । बाबाले व्यस्तताका कारण ३ जना छोरालाई सम्हाल्न नसकेर हामी सबैलाई होस्टल राखिदिनु भएको थियो ।
हाम्रो विद्यालयमा प्रत्येक महिनामा एक पटक अभिभावकहरुको मिटिङ हुन्थ्यो । अभिभावकहरु आउनुहुन्छ भनेर हामी ड्रेस लगाएर रेडी भएर बस्थ्यौं । त्यो समयमा कसैको अविभावक आउनु हुन्थ्यो भने कसैको आउनु हुन्न थियो । मेरो बाबा कहिल्यै पनि प्यारेन्स मिटिङमा नआउने । तर अचानक एउटा प्यारेन्स मिटिङमा आउँदा मलाई अचम्म लाग्यो । बाबा त्यो समयमा ‘चट्याङ’ चलचित्रको छायाँकनमा ब्यस्त हुनुहुन्थ्यो । चलचित्र छायाँकनको समयमा उहाँको हात भाँचिएको थियो । पहिले बाबालाई भेट्दा त केही लागेन तर बाबा घर फर्के पछि मलाई एकदमै रुन मन लाग्यो । कारण, बाबाको हात भाँचिनु । त्यस्तो हुँदा पनि भेट्न आउनुभयो भन्ने भयो । म त्यो बेला निकै रोएको थिएँ ।
सानैदेखि होस्टेलमा बसेका कारण पनि होला मेरो बाल्यकाल अरुको भन्दा निकै फरक रह्यो । होस्टेलमा केटी भन्दा पनि मेरा केटा साथीहरु धेरै थिए । होस्टेलमा बस्दा म एकदमै निडर थिएँ । होस्टेलमा बस्ने केटाहरु कोहीसँग पनि डराउँदिनथेँ । अरु कसैले केही भनेको खण्डमा पनि आफूसँग केटाहरु छन् भनेर धाक लगाउँथे । बाहिरका मान्छेहरुसँग पनि डराउँदिनथेँ ।
मेरो एकोहोरो प्रेम
विद्यालयमा पढ्ने क्रममा मैले कक्षा ४ देखि एउटा केटीलाई मन पराएको थिएँ । त्यो मेरो मात्रै रोजाई थियो । मेरो एकोहोरो प्रेम । यहि कारण मैले उनलाई आफूले मन पराएको कुरा भनिन । तै पनि एकोहोरो माया भने गरिरहेँ । हाम्रो कक्षा एउटै थियो । तर पछि कक्षा १० मा ग्रेडिङ आधारमा कक्षालाई समूहमा विभाजन गरियो । मैले मन पराएको मान्छे सेक्सनमा ए मा म परेँ जी मा ।
हाम्रो कक्षा फरक भएपछि कक्षामा जानुभन्दा पहिले लाईन बस्ने क्रममा म उनलाई हेरेर चित्त बुझाउन थालेँ । मेरो यो कुरा मेरा धेरै साथिहरुलाई थाहा भईसकेको रहेछ । पछि उनैबाट प्रेम पत्र आयो । मैले केटीलाई नभेटी प्रेम स्वीकारे । उनी मैले पहिला देखि मन पराएको मान्छे भएकै कारण मैले यसो गरेँ । पछि उनीबाट थाहा भयो, उनी पनि मलाई हेर्दिरहिछन् । एक समयमा चाहिं उनलाई र उनको साथीलाई कन्फ्युजन भएको रहेछ मैले कसलाई हेरिराछु भनेर ।
अरु बेलामा केही नभए पनि होस्टेलबाट खाजा खाएर आउँदा बाटोमा उनी बसीरहेको बेलामा मलाई साह्रै लाज लाग्थ्यो । म एकदमै नर्भस हुन्थे । उनीसँग बोल्न अनि भेट्न मन त लाग्थ्यो । तर मलाई एकान्तमा गफ गर्न मन लाग्थ्यो । अरुको अगाडि होईन ।
किशोरावस्थामा माया गर्न मन लाग्ने, बोल्न मन लाग्ने हुन्छ । तर मलाई यस्तो भयो भन्दैमा तपाईँलाई पनि हुन्छ भन्ने छैन । यो उमेरमा अध्ययन निकै महत्वपूर्ण भएका कारण सबैभन्दा बढी अध्ययनमै ध्यान दिनु पर्छ । आफू कुन क्षेत्रमा लाग्दा राम्रो हुन्छ त्यसलाई विशेष रुपमा हेर्नुपर्छ । तपाई आफू लाग्ने क्षेत्रको बारेमा बुझेर मात्र त्यस क्षेत्रमा अध्ययन गर्न जानुहोस् भन्छु म त । अरुको दबाबमा आएर अध्ययन गर्नु भन्दा पनि आफूलाई मन पर्ने विषय छनौट गरेर पढ्नुहोला । त्यसले सफलताको स्वाद चखाउँछ ।
‘प्रेमीगीत २’ को तेस्रो गीत ‘बिस्तारै बिस्तारै’ सार्वजनिक
अमेरीकाको केन्टकी राज्यमा अन्तराष्ट्रिय नेपाली कलाकार समाज केन्टकी च्याप्टरको गठन भएको छ । चर्चित हाँस्य कलाकार…
अमेरिका जाने अवसर सहित ‘नेपाल्स ब्युटि डिभा’ छानिने